Sheikh Mukhtaar Roobow oo Booqasho ugu tagay Xasan Daahir Aweys & Arrimo ay ka wada hadleen oo - Hablaha Media Network
Sheikh Mukhtaar Roobow oo Booqasho ugu tagay Xasan Daahir Aweys & Arrimo ay ka wada hadleen oo
HMN:- Sh Mukhtaar Roobow Mansuur ayaa mudo kadib soo arkay hogaamiyihii ay isku kooxda ahaayeen ee Xasan Daahir Aweys kaas oo xabsi guri ugu jira magaaladda Muqdisho.
Saraakiisha Nabad Sugidda ayaa wehlinayay booqashadda uu Roobow ugu tagay Sh Xasan Daahir Aweys oo mudo dheer ka hor kasoo baxsaday Shabaab.
Inkastoo aan la ogeyn waxyaabihii ay labada wadaad ka wada hadleen, hadana isku keenidda Roobow iyo Xasan Daahir Aweys ayaa soo xasuusineysa xiligii ay ka wada shaqeyn jireen kooxdii Shabaab iyo midowgii Maxkamadaha Islaamiga ah.
Warar kale ayaa sheegaya in Roobow uu Sh Xasan Daahir Aweys kala tashtay arrimo ay kamid yihiin inuu ku biro dowladda Soomaaliya oo xil looga magacaabo iyo inuu qof shacab ah oo la ilaaliyo u noqdo.
Xasan Daahir Aweys ayaa sidoo kale loogu baaqay inuu hor yimaado saxaafadda uuna sheego in Shabaab ay ku qaldan yihiin dagaaladda ay wadaan si uu uga baxo xabsi guriga uu mudada dheer ku jiro.
Si kastaba, wararka ayaa intaas ku daraya in labadan Nin ay kulamo joogta ah yeelan doonaan maadaama ay Muqdisho ku wada sugan yihiin, waxaana la filayaa in dowladda Soomaaliya ay sidoo kale wadahadalka kusoo darto Xasan Daahir Aweys.
HOOS KA DHAGAYSO XOG BUUXDA